Muungaab: Waa la xirayaa cid kasta ee Muqdisho ku qabata shirk u saabsan Banaadir & labada Shabeelle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab: Waa la xirayaa cid kasta ee Muqdisho ku qabata shirk u saabsan Banaadir & labada Shabeelle
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Jen. Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa sheegay in ciidamada booliska iyo nabadsugidda gobolka amar u qabaan iney xiraan cid kasta ee isku dayda iney Muqdisho ku qabato shir looga hadlo maamul u sameynta Banaadir iyo labada Shabeelle.
Warka kazoo baxay gudoomiye Muunaagb ayaa yimid kadib markii shalay ciidamada booliska iyo nabadsugidda gobolka Banaadir ay kala dareeriyeen shir lagu qabanayay hotelka Kuwait Palaza ee magaalada Muqdisho, kaasoo la sheegay in looga hadlayey dhismaha maamul lagu sheegay BanaadirLand oo ay hoos imaanayaan labada Shabeelle.
Jen. Muungaab oo ka hadlayey munaasabad maamulkiisa lagu taageerayey oo Muqdisho ka dhacday ayaa fitno wadayaal ku tilmaamay kuwa abaabulaya maamul loo sameynayo Banaadir iyo labada Shabeelle, wuxuuna cadeeyey in ciidamada amaanka lagu amray iney xrixiraan cid kasta oo howshaas wadda.
Wuxuu sidoo kale, Muungaab sheegay inuusan jirin hotel lagu qaban karo shir uusan fasxin maamulka gobolka Banaadir.
“Muqdisho laguma qaban karo shir looga hadlayo maamul loo dhisayo Banaadri iyo labada Shabeelle, ciidamada booliska iyo nabadsugiddu waxey amar u qabaan iney xirxiraan cid kasta ee qabata shir nuucaas ah, mana jiro hotel marti gelin kara shir aan maamulka gobolku fasixin” ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Muungaab.
“Maanta qolo ayaa isku dayey iney qabtaan shir lagu sheegay BanaadirLand, waa la qabqabtay, waxaana u jareynaa min lix bilood, qolooyinka arrimahaas wada waa fitno wadayaal, iyaga Shabaabna isku mid ayaa loola dagaallamayaa” ayuu sidoo kale yiri Muungaab oo ka hadlay shirki shalay laga dareeriyey ee ka dhacayey hotelka Kuwait Palaza.
Muungaab ayaa ku hanjabay iney tilaabo ka qaadayaan dad uu sheegay iney madaxtinimo jaceyl ka qaadeen cudurka raabiyada loo yaqaano, wuxuuna xusay inuu dalku leeyahay hal madaxweyne oo ah Xasan Sheekh Maxamuud, gobolka Banaadirna leeyahay maamul uu isagu hogaamiyo, wax kale oo laga dhisi karana aysan jirin.
Ugu dambeyn, Muungaab ayaa kooxaha wada shirarka Banaadir Land ku eedeeey iney doonayaan iney Muqdisho ka abuuraan qalqal la mid ah kan ka taagan magaalada Baydhabo.
Nairobi: Lix ku geeriyootay qaraxyo ka dhacay xaafadda Soomaalidu degto ee Islii